ANKOLAFY RAVALOMANANA : Tonga nitsapa alahelo ny fianakavian’i Lalao Randriamampionona – MyDago.com aime Madagascar
ANKOLAFY RAVALOMANANA : Tonga nitsapa alahelo ny fianakavian’i Lalao Randriamampionona
Tonga namangy ny fianakavian’i Lalao Randriamampionona tenyamin’ny trano fonenany teny Ambodiafotsy Ampitatafika io atoandro io ny Ankolafy Ravalomanana, notarhin’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny Filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ny Pariminsitra Lefitra misahana ny toe-karena sy Indostria Botozaza Pierrot, ny minisitry ny fambolena Roland Ravatomanga, ny fiompiana Ihanta Radnriamandranto, ny minisitry ny varotra Olga Ramalason, ny minisitry ny fitsinjaram-pahefana Ruffine Tsiranana sy ireo Cst sy Ct sasantsasany avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana. Nitondra ny teny fampiononana sy fankaherezana ho an’ny fianakavian’i Lalao Randriamampionona noho izao fahalasanan’ny olomangan’ny firenena izao, ny lehiben’ny delegasiona Rakotoarivelo Mamy. Ny vadiny Roland Randriamampionona dia nisaotra ny Ankolafy Ravalomanana amin’ny fitondrana ny teny fampiononana ary nanamafy hatrany fa hitohy hatrany ny tolona izay efa nataony.
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 avril 2013 22 avril 2013 Catégories Politique
6 réflexions sur « ANKOLAFY RAVALOMANANA : Tonga nitsapa alahelo ny fianakavian’i Lalao Randriamampionona »
23 avril 2013 à 3 h 44 min
Taitra ny tena raha nahafantatra ny vaovao omaly:
MANDRIA AM-PIADANANA ITOMPOKOVAVY.
23 avril 2013 à 4 h 13 min
Amin’alahelo lehibe sy fahatairana ny nandraisana izao fisarahana tampoka amin’i Tompokovavy LALAO ..
Ny teny entinay mianakavy aminao r’i RLAND sy ny Fianakaviana Rehetra dia tsy afafa ny ranomaso na hampitony ny fahorianareo fa miara mivavaka Aminareo izahay ka ANDRIAMANITRA izay tiantsika sy JESOSY KRISTY IZAY MPAMONJY SY SAKAIZANTSIKA anie
hanampy sy homba ary hampahery Anareo mianakavy…
23 avril 2013 à 4 h 57 min
Dia tsy mifidy toka-trano hidirana tokoa ve ny fahafatesana nefa toa ny tsara foana no mandeha aloha ?
Dia mahaiza mionona tompoko, ary ho tanteraka anie ny asa nimasoan’i Tpkvavy Lalao Randriamampionona hatr’izay.
24 avril 2013 à 3 h 39 min
Andriamanitra irery ihany no Tompon’ny Aina ka maiza mionona tompoko. Vita ny anjarany ety an-tany ary mbola ho avy isika rehetra mbola velon’aina.
24 avril 2013 à 11 h 17 min
Somary efa tara aho vao nahafantatra an’i tompokovavy izay tena olomanga-pirenena ary tia tanindrazanana tokoa.Raha ny asa vitany tety an-tany no novakiako volana vitsivitsy lasa izay dia medri-piderana ity nodimandry ity.
Nieritreritra mihintsy aza aho herinandro lasa izay fa raha i Ramatoa Lalao Ravalomanana no filoha dia i Tompokovavy ny praiministra dia aoka fotsiny re.
MANDRIA AM-PIADANANA TOMPOKO
25 avril 2013 à 5 h 01 min
Mandria ampiadanana fa ny soa nataona t@ Malagasy tsy ho adinoana mihintsy ny Tompo anie hanome fiononana feno ho an’i fianakaviana manontolo
Précédent Article précédent : RANDRIANARISOA GUY RIVO : tsy maintsy mandresy isika
Suivant Article suivant : Tokana ihany ny kandidà dia Ramatoa Lalao Ravalomanana